Yakanakisa Inotakurika Mota Inokurumidza Simudza DC akateedzera Mugadziri uye Fekitori Tonghe
LUXMAIN DC akateedzana Kurumidza kusimudza idiki, yakajeka, yakakamurwa mota kusimudza. Iyo yese seti yemidziyo yakakamurwa kuita maviri ekusimudza mafuremu uye imwechete simba unit, huwandu hwenzvimbo nhatu, dzinogona kuchengetwa zvakasiyana. Iyo imwechete furemu yekusimudza furemu, iyo inogona kutakurika nyore nemunhu mumwe. Iyo yakagadzirirwa vhiri rekudhonza uye vhiri repasirese, iyo iri nyore yekukweva nekugadzirisa musimudziso chinzvimbo. Iyo DC12V simba unit rakabatana neinjini yemotokari kuburikidza newaya yemoto, iyo inogona kutyaira mota kuti ishande uye kutyaira iyo yekusimudza furemu yekusimudza mota zviri nyore. Iyo yeyuniti yemagetsi zvakare yakagadzirirwa ne hydraulic yekuenzanisira chishandiso, kuona kuti inowirirana kusimudza kwemafuti ekusimudza mativi ese maviri. Ose ari maviri magetsi unit uye mafuta cylinder haana mvura. Chero bedzi iri pavhu rakaomeswa, unogona kusimudza mota yako kuti igadziriswe chero nguva uye chero kupi.
Iwe uchiri kugadzirisa mota panze nenzira iyi? Iwe uchiri kunetsekana nemota yako ichiputsa kunze nekumirira kununurwa kwevanyanzvi? Inguva yekuchinja tsika!
Pfungwa nyowani yeindasitiri inoita kuti zvisakwanisika kuitika.
LUXMAIN Kurumidza kusimudza unogona kuzviita!
Kureba kushoma kwekusimudza furemu ndeye 88mm chete, iyo inosangana neiyo chassis kukwirira zvinodikanwa zvemhando dzese pamusika.
Yakakamurwa yakavhurika yekusimudza furemu dhizaini.
Yakakura nzvimbo inoita kugona kukuru!
Inopa inokurumidza mavhiri-emahara nyore uye kujekesa kwepamotokari yekutora
Max kurodha kukwirira kusvika ku632mm (yakashongedzwa neakakwira adapters).
Kurumidza uye nyore gungano.
Unganidza iyo yekusimudza furemu uye yeyuniti yemagetsi kuburikidza ne2 seti yemapaipi emafuta anouya nemuchina uye iwe unogona kuushandisa. Rwendo rwese runongotora 2 maminetsi!
Zviri nyore kufamba, zviri nyore kutora neumwe mukomana!
Isu takagadzira dhiraidhi / pani vhiri, iwe unogona zvakare kudhonza, Shandura iyo yekusimudza furemu kugadzirisa iyo yekusimudza chinzvimbo.
LUXMAIN qucik kusimudza inogona kuchengetwa uye yakaturikwa pamadziro, ichichengetedza nzvimbo.
Saizi diki, Inongoda ngoro diki yekundiendesa kumba.
LUXMAIN inokurumidza kusimudza ine kugadzikana kwakanyanya. Mushure mekunge mota yasimudzwa, munhu anoshandisa simba rekunze kumotokari kubva chero nzira, uye mota haifambe zvachose. Naizvozvo, iwe unogona kushanda uine chivimbo.
Kana iyo michina iri muhafu-yekusimudza nyika, kana simba rikangoerekana radimburwa, iyo yekusimudza furemu zvakare yakagadzikana kwazvo, uye ichagara iri muhafu-yekusimudza nyika isina kudonha.
Iyo michina yakagadzirirwa nemuchina wekuchengetedza chengetedzo, iyo yekusimudza furemu yakagadzirwa nesimbi yakakosha, uye mechiniki performance iri pamusoro. Iyo 5000kg inorema mutoro bvunzo inoitwa pasina iyo humburumbira yemafuta, iyo ichiri yakatsiga sezvinobvira.
Iyo cylinder yemafuta yakagadzirirwa mvura yekudzivirira mvura, iyo inobvisa njodzi yakavanzwa yekundikana inokonzerwa nekuora kwemadziro emukati esirinda yemafuta nekuda kwemvura inoputika, uye inowedzera hupenyu hwebasa reiriiri humbwa. Unogona kunyatsosimudza mota uye kuishambidza zvakakwana.
Iyo simba unit inosvika IP54 dziviriro nhanho!
Ndokumbira usarudze 46 # anti-wear hydraulic mafuta. Munzvimbo inotonhora, ndapota shandisa 32 #.
Muenzaniso Nha L520E L520E-1 L750E L750E-1 L750EL L750EL-1
Kupa Voltage AC220V DC12V AC220V DC12V AC220V DC12V
Chimiro chakapararira kureba 1746mm 1746mm 1746mm 1746mm 1930mm 1930mm
Mini Kureba 88mm 88mm 88mm 88mm 88mm 88mm
Kureba Kwemafuremu 1468mm 1468mm 1468mm 1468mm 1653mm 1653mm
Max.Kusimudza Kureba 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm 460mm
Max.Kusimudzira Unyanzvi 2500kg 2500kg 3500kg 3500kg 3500kg 3500kg
Rutivi rwakaenzana rwakareba rwekusimudza furemu 215mm 215mm 215mm 215mm 215mm 215mm
Imwe furemu uremu 39kg 39kg 42kg 42kg 46kg 46kg
Power unit uremu 22.6kg 17.6kg 22.6kg 17.6kg 22.6kg 17.6kgg
kusimuka / kudzikisa nguva 35 / 52sec 35 / 52sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec 40 ~ 55sec
mafuta tangi chinzvimbo 4L 4L 4L 4L 4L 4L
● Kurema kwekusimudza uremu: 2500Kg
● Electro-hydraulic drive, yakagadzirirwa DC12V DC magetsi
● Mhando dzinoshanda: 80% yeA / B kirasi mota
● Nzvimbo inoshanda: kunze kwekuchengetedza, kununura munda, mujaho wemujaho
● Kurema kwekusimudza uremu: 3500Kg
● Mhando dzinoshanda: 80% yeA / B / C kirasi mota
● Nzvimbo inoshanda: workshop uye garaji remhuri
● Mhando dzinoshanda: 80% yeA / B / C kirasi mota （Inogona kusangana nezvinodiwa zve3200mm wheelbase modhi)
Pashure: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L5800 (A) ine inobereka inokwana 5000kg uye yakafara post nzvimbo
Zvadaro: OEM Kutengesa China Kuvhiringidza Chinyorwa Ringlock Simbi Aluminium Plank
Mota Inokurumidza Simudza
Kurumidza Mota Jack Simudza
Kurumidza Simudza Mota Simudza
Quickjack Inotakurika Mota Simudza
Kurumidza Kusimudza Mota
Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Imwechete Kuita Cylinder, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza,